Raajo cilmi-baarista - Koorka Gemology - machadka caalamiga ah ee maraakiibta - maraakiibta
Gemology waa sayniska ee qalabka jawharad, oo labaduba gaar ah ee laan weyn ee mineralogy sayniska. gemology Study daboolayaa dhammaan dhinacyada farsamada iyo qalabka dhagaxyo jawharad. Waxay kiimikada, guryaha jirka iyo indhaha, farsamooyinka loo isticmaalo wax soo saarka ee imitations jawharad iyo synthetics, goynta iyo fiiriyo oo dhagaxyo, oo ka sii muhiimsan hababka iyo alaabtii shaqeeya ee aqoonsiga, buundooyin iyo qiimaynta oo dhagaxyo.
Ereyga 'muraayadda' waxa uu daboolayaa fursado aad u ballaaran. Qalabka maraakiibta badankoodu waa macdan, laakiin 3000 ama sidaas, macdanaha loo yaqaano nin, kaliya ku saabsan qoysaska 70 / dhagxan 500 waxaa loo tixgeliyaa inay leeyihiin lahjadaha loo yaqaan 'special gemstones'.
Waxaan baro gemology bilowga ah ee Ingiriis ama Faransiis
Fikrad asaasiga u ah dhagaxyo waaweyn ee laga helo suuqa Cambodia. Dabcan heer-bilowgii waxay awoodda dhinacyada muhiimka ah ee GEMS sida guduud, iyo safayr, zircon, peridot, Garnet, iyo tobasiyos, aquamarine, quartz crystalline, khalkedoon, obsidian, iwm
Maalin badh (saacadaha 3)
Qofka 1: 100 $
2 Qofka 4: 60 $ / qofkiiba
5 qof +: 50 $ / qofkiiba
Maalin buuxda (2 x 3h = saacadaha 6)
Qofka 1: 200 $
2 Qofka 4: 120 $ / qofkiiba
5 qof +: 100 $ / qofkiiba
Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho tigidh macluumaad.
Dr. MOHAMED MOHAMED TOLBA ayaa sheegay in uu dhammaystay kooras tababar ah ee gemology. Maalin 1 (saacadood 6)
"At 15 april 2015 aan ku qaatay maalin aad u xiiso badan oo xiiso leh barashada koorso gemological degdeg ah ugu Gemological Institute of Cambodia, Mr. Jean-Philippe aan macalinka ahaa inta lagu guda jiro 6 saacadood oo waxbarasho, Isagu waa xirfadle in gemology. Waxaan qabaa Gemological Institute of Cambodia waa meel sax ah si aad u hesho aqoon badan oo ku saabsan gemology iyo dhagaxyo. "
Mr. Sergio (ka Italy) iyo Marwo WIRIYA (ka Thailand) ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. Maalin badhkeed (saacadood 3)
"Philippe il proprietario E Una qof molto competente e professionale nel Campo della gemmologia, abbiamo Elijah un fatto giornata corso di mezza in cui ci ha introdotto nel Mondo delle gemme.ha Una macradka notevole di gemme autentiche cambogiane e aan ... insomma se volete comprare rubini e zaffiri veri birmani recatevi da Philippe e il n ° 1 Siem a goosan. Inoltre se kalle "- May 5, 2015
Mr. Carl (ka England) iyo Marwo AGYNESS (ka China) ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. Maalin 1 (saacadood 6)
Mr. toh hock An (ka Taiwan) ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. Maalin badhkeed (saacadood 3)
Master Hanz của(Ka Filibiin) ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. Maalin badhkeed (saacadood 3)
Ms. Ramya Ponnada & Mr. Krishna Kanth Ponnada (Hindiya) ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. Maalin badhkeed (saacadood 3)
Mr. Sonny Rodriguez & Ms. Tiffany Rodriguez (ka Filibiin) ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. Maalin badhkeed (saacadood 3)
"Haddii u baahan tahay dhagaxyo jawharad damaanad, halkan tag" - aan raadinayey jawaabo ku saabsan dhagaxyo jawharad iibiyey suuqa jir ah oo meeshan iigu bixiyo oo dhan Xog i loo baahan yahay in la ogaado gaar ahaan siidaayay of GEMS ah. Waxaa cad in dukaamada jawharad ugu badan ee suuqa aad ka iibin doonaa kuwa been abuur ah. Waxaan ku qoran in warshad 3hour ah iyo waxa hubaal broadend aqoontayda ku saabsan dhagaxyo. Waxay ii siiyey shahaado ka dib iyo waxa ay dhab ahaantii wuxuu ahaa a 3hours istaahilo. Mr. Jean waa run ahaantii dareen ku saabsan GEMS. Ha hubiyo website, la xiriir iyaga iyo waxay leeyihiin doonaa a tuk-tuk aad qaado ee aad hotel. November 12, 2015 - In kiis kasta oo aad xiiso u waxbarasho GEMS kaliya booqo oo arag dhagaxyo uu leeyahay fudud looga heli karaa for sale aadan
Mr. Thorstein iyo Mr. Widar (Norway) ayaa dhameystirtay tababar ee gemology. Maalin badhkeed (saacadood 3)
Tom oo Kristin (ka USA) & Norma iyo Trevor (Canada) ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Konstantin iyo Silviya (oo ka socda Bulgaria).
Miles, July, Rosie, Tilly & Celeste (ka England).
Ms. Lee Hui Yun (ka Singapore).
Annick & Maxim (ka Australia).
Jasmine, Bruce & Allan (ka Filibiin).
Ann Mary &
Marc & Lani, From Los Angeles, California, USA
Ms. Ruth, ka Indonesia
Mr. Jeff, ka USA
Joshua & Michael, ka USA
Stephanie & Mason, ka Hong Kong
Gary, Diane & Degmada Afgooye, ka USA
Anna & Diana, ka Russia
Sök heng, Pui San, Chiew Sum & gabya Kwan, ka Malaysia
"Booqashada Awesome - furitaanka oo xiiso leh iyo isha" - meel Great in ay booqdaan! Waxaan qaatay saacad cashar 1 ah, taas oo kor u dhamaaday in ay yara dheer ay sabab u tahay xaddiga badan oo aqoon in la wadaago by Jean. Jean weynayd ee kaliya ma sharxaya noocyada kala duwan ee dhagaxyo, laakiin sidoo kale wuxuu ku weynaa ee keenaya nolosha ee macnaha guud ee Kamboodiya sidoo kale la sheekooyin aad u qabow. Sidoo kale mudaharaadyo aad u weyn shaybaarka halkaas oo aad si dhab ah u hesho si aad u aragto noocyada kala duwan ee GEMS iyo isku day in aad xisaabiso oo ka mid ah waa dhab, loola dhaqmo ama dardaro! Sidoo kale waxaa jira xulasho badan oo GEMS Kamboodiya maxalliga ah si aad u iibsato qiimo aad u macquul ah ka dib markii casharka. Learnt badan, badan oo xiiso leh oo ka tagay oo leh jawharad Kamboodiya fiican iyo mahadnaq helay cusub gemology! - February 5, 2016
Nikolas, Christodoulos & Despoina, ka Greece
Ms. Katherine, ka Spain, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Naho, ka Japan & William, ka UK, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Philip, ka England, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Knud-Erik, Dorte & Dorthe, ka Denmark, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Ms. Jerica, ka USA, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Ms. Lena, ka Ukraine, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Waxaan booqday machadka in badan oo ku saabsan dhagaxyo Kamboodiya og. waa waxaan idinku leeyahay meeshan si fiican loo sameeyey oo dhan - martida, hagayaasha, xirfadlayaasha, iibsada. Halkan waxa aad ka arki kartaa iyo waayo-aragnimo 'oo dhan dhagaxyo dunida. macluumaadka waa cad yahay, jawiga waa cajiib. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Philippe waayo cashar fiican - March 14, 2016
Javier & Andrea, ka England, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Tanya, Sebastian & Scott, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Waxaan qaaday wiilkayagii sano jir 8 weheliyaan koorso hal saac ah tan iyo markii uu ahaa mid aad u xiiso GEMS, dhagaxyada iyo kiristaalo uu. Jeanne-Pierre qaatay ka badan saacaddii qoondeeyey oo ahaa mid aad u aqoon iyo xamaasad leh oo ku saabsan mawduuca gemmology. Our ina fiican ku riyaaqay koorsada, sida gaar ahaan fadhiga aan sameeyey, shaybaar, aqoonsashada GEMS kala duwan oo shaashadaha ka under. Waxa uu ahaa faraxsanahay in tag shahaadada iyo sidoo kale dhagax Praseolite ah. Mahadsanid. - March 29, 2016
Sangita & Daniel, ka England, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology
Hilary & Ian, ka Australia, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Maria & Joanna, ka Philippines, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Waxay qaateen koorsada maalin badhkeed machadka gemological. Waxa ay ahayd mid aad wargelin ah! Dabcan Taas ka dib, waxaan hubaal waa 100% kalsooni badan oo ku saabsan qiimaynta dhagaxyo. - April 8, 2016
O'Malley Qoyska, ka USA, ka dib markii uu tababar ee Gemology.
Silvester & Silvia, ka Australia, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Waxaa laga yaabaa 12, 2016
Ms. Akemi, ka Japan, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Waxaa laga yaabaa 15, 2016
Julius, Marieflor, Sandrine, Coleen & Cedric, ka Philippines, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Waxaa laga yaabaa 29, 2016
Ma. Luz, ka Philippines, & Gordon, ka UK, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Waxaa laga yaabaa 31, 2016
Katie, Edwardo, Jennifer, & Jeffrey, ka USA, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Jamie & Ellie, ka USA, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Pauline & Ronan, ka France, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Sue, Maureen & Bruce, ka USA, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Anne & Olivier, ka France, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Max & Hester, ka USA, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Carrie & Martijn, ka Australia, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Katherine, ka Australia, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Allesha & Ross, ka USA, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Mr.Thiery, ka France, ayaa si rasmi ah tababar hal toddobaad (30 saacadood) ee gemology ah.
Ali & Joe, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Lenny, ardayga noogu yaru, ka France, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Steven & Jene, ka USA, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Fiona & Shah, ka England, ayaa dhameystirtay tababar ee gemology.
Aislinn & Dominique, oo ka socda Hong Kong.
Tababarka iibka dharka dharka ee Sabara Angkor Resort & Spa
Faallooyinka waa la joogaa
55th Bangkok GEMS iyo Waxyaalaha la isku qurxiyo Fair
Thanks to Mr Jayesh Patel booqashada shaybaarka